किन छाडे वर्षा र प्रशान्तले ‘रानीमहल’ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
किन छाडे वर्षा र प्रशान्तले ‘रानीमहल’ ?
‘ऐश्वर्य’ भिलेन प्रशान्त ताम्राकार र ‘पशुपतिप्रसाद’ फेम अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले एकसाथ चलचित्र ‘रानीमहल’ बाट हात झिकेका छन् । केही दिन अगाडि काठमाडौंको पाँचतारे होेटल अन्नपूर्णमा चलचित्रको शुभ मुहूर्त गरिएको थियो ।
आखिर किन छाडे त वर्षा र प्रशान्तले चलचित्र ? दुवैको एउटै गुनासो छ चलचित्रको छायांकन सुरु हुन सकेन । नायिका वर्षाले ‘रानीमहल’ का लागि आफूले चार वटा चलचित्र छाडेको सुनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘मैले असारमै चलचित्र साइन गरेकी थिएँ । तर, माघ सकिन लाग्दासम्म पनि चलचित्रको छायांकन सुरु भएन । म फागुनसम्म पनि पर्खिन तयार थिएँ तर छायांकन तत्काल सुरु नहुने भएपछि म बाहिरिएकी हुँ ।’ उनले साइनिङ अमाउन्ट पनि फिर्ता गरिसकेकी छिन् ।